Kawach Online | » साई अवतार नेपालमा साई अवतार नेपालमा – Kawach Online
Kawach Online > लेख > धार्मिक लेख > साई अवतार नेपालमा
साई अवतार नेपालमा
साई अवतार नेपाली साई बाबा
इतिहास साक्षी छ त्रेता युगमा जव भगवान रामचन्द्र राजा दशरथ र माता कौशल्या का पुत्रका रुपमा प्रकट कुनुभयो त्यतिखेर माताकौशल्याले आफ्नो पुत्रलाई चारहातमा शंख, चक्र, गभा, पद्यम दिएको भयंकर रुप देखेर भन्नु भयो यस्तो भयंकर रुपमा होइन सानो वालकको रुपमा आउ भननु भयो तव भगवानराम सामान्य वालक जस्तै सानो रोधन गरि आउनु भयो । राजा दशरथको जेष्ठ पुत्र एक राजकुमार हुनु भयो ता पनि उहाँले आफनो जीवनकालमा अनेकन दुःख , कष्टहरु सहन गर्नु भयो , एक मर्यादा पूरुषको धर्म निभाउनु भयो । विभिनन दैवी लिलाहरुको प्रर्दसन गर्दै आफ्ना दिव्य चरित्रवाट सम्पूर्ण मानव समुदायलाई मर्यादाको पाठ सिकाएर जानु भयो । त्यसैले उहाँलाई संसारले मर्यादा पुरुषोतमको नामले पुकार्दछन । सवरीको रामनामजप र उनको प्रतिक्षा जसले गर्दा उनको नाम सवरी रहन गयो भगवान स्वयं उनको घरमा पाल्नुभएको कुरा रामायणका पानाहरुले प्रमाण दिइराखेका छन् । एकरामनामकोजपले कति पुण्य मिल्छ भन्नेकुरा रामायणमा उल्लेख छ । निरन्तर रामनाम जप्नेको पुण्डेको कुनै लेखाजोख ागर्न सकिदैन । त्यस्तै द्धापर युगमा भगवान कृष्ण माता देवकीको कोखवाट जन्म लिनुभयो । भगवान कृष्णले आफ्नो लिलाकालमा अनेकौ दिव्यलिलाहरु देखाउनु भयो । त्यस मध्य ग्वालवालहरु संग प्रेम लिला, राधासंग ह्रास लिला र कंशनाश आदि सुनन र पढ्न पाइन्छ । कृष्णका सम्पूर्ण लिलाहरुको वर्णन स्वयं कृष्णनै गर्न सक्नुहुन्छ । भगवान कृष्ण प्रेमरुप र रसावतार मानिनुहुन्छ । गोपीनीहरु भ्गवानकृष्णलाई भगवान भनेर नचिनेपनि भगवानको लिलामा मन्त्रमुग्द भएरै भगवानको क्रिपा प्राप्त गरेका थिए ।
भगवानका यस्तै दिव्य अवतरणहरुको क्रममा सिरडी साइको पनि यस पृथ्वीमा अवतरण भयो । जसको वारेमा यस भन्दा अगाडी का अंकहरुमा आइपनि सकेको छ । विभिन्न अलौकीक शक्तिहरुद्धारा हजारौ भक्तहरुलाई आनन्द दिदै अवतारको दिव्यताको झलकहरु देखाउनु भयो । ब्यापारीले तेल नदिए पछि संकप द्धारा पानिवाट दियो वाले पछि ब्यपारी नतमस्तक हुनु । वावामा आफ्नागुरुको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनु र बाबाले मेरो समाधीमा टाडा टाडा देखी मान्छेहरुको भिड लाग्नेछ भन्नुभएको कुराको पुष्टी आजका दिनहरुमा सिरडी जाँदा हामी प्रत्यक्ष देख्न पाउदछौं । यावत कुराहरुवाट पुष्टी हुन्छ की अवतारी पुरुषहरु सर्व अन्तर्यामी साथै सर्वशक्तिमान हुन्छन । महापुरुष अर्थात अवतारहरु आफ्नै शब्दमा भन्ने गर्दछन की इश्वरको इच्छा विना कसैले पनि उसको समनिध्यता वा सामिप्यता पाउन सक्दैन । संसार अन्याय र अत्याचार वाट पल्सिन थाल्छ पापको चारैतिर चाप वढ्न थाल्छ तव तव इश्वरले राम , कृष्ण, बुद्ध, इशामशिह, इशुख्रिष्ट, सिरडीसाई, सत्यसाई र अहिले आएर संजय साई जस्ता अवतारहरुको प्राकट्य वाट प्रष्ट हुन आउदछ । कलीयुगमाअवतारहरुको कुरा गर्दा सत्य साई बाबाको नाम अग्र पंत्तिमा आउदछ । सत्य साई बाबा भारतको एक विकट गाँउमा पिता पेड्डा वेंकापा र माता इश्वरम्भाको कोखवाट जन्मीनुभएका सत्यसाई लाई त्यसैले मात्र जान्न , बुझ्न र अनुभुति गर्न पायो जसलाई स्वयं बाबाले आफुतिर आर्कशीत गर्नु भयो । इश्वरीय अवतार हरुलाई चिन्न कत्तीकोकठिन हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं सत्यसाई वावाका माता पिता द्धारा छोराले अनेक अचम्म अचम्मका कुराहरु गरेको देखेर वोक्सीले यस्तो वनायो भनेरकपाल खौरेर तालुको विचमा चिरेर नुन खुर्सानी हरुलगाएको घटनाहरु ववाको वारेमा लेखीएका कितावमा पढदा हामि सबै स्तब्ध भएका थियौं । यसरी कष्ट दिदा पनि मुस्कुराईरहने यस्ता महान पुरुषको महत्व बुझ्न निकै गाह्रो छ । कुनै दिन एक प्रवचन पछि एक चोटी एउटा पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए की हजुर बाबा हजुरले परमात्माका यी लक्षणहरु कहिलेदेखी प्रकट गर्न थाल्नुभयो ? उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो म यो भन्दा पहिलाको जन्ममा सिरडी साईको रुपमा थिए त्यो वेला यस्ताा लक्षणहरु भएका थिए । त्यो भन्दा पहिलाम कृष्णको रुपमा थिए भनेर भन्नुभएको प्रमाण माता इश्वरम्भाको कितावमा पढ्न पाइन्छ । युग युगमा भगवान मानव कल्याणका लागि जगतकल्याणका लागिनै प्रकट हुने गर्दछन् । तर त्यस्ता अवतारहरुलाई चिन्ने मान्छे विरलै हुन्छन झन अहिलेको यस कलियुगमा त भौतिक चमक धमक ले आध्यात्मलाई अत्यन्तै अध्यारोमा पुर्याएको छ । गितामा भनिएको वाक्य यहाँनिर सर्वथा सत्य सावित भएको छ कि कलियुगमाा हजारौ व्यक्तिहरुमा कोई एकब्यक्तिले आफ्नो कल्याणको लागि प्रयत्न गर्छ र भगवानले देखाएको वाटोमा हिड्छ । त्यसलेनै भगवानलाई सम्पूर्ण सृष्टिको कण कणमा भगवानको दर्शन गर्दछ । भनिएको छ की भोकोले खाना खाएर पाउने आनन्दनै म हँु, प्यासाले पानि प्पियपछि पाउने आनन्दनै म हुँ , रोगमा तडपिएको रोगी वालक, बृद्ध,असक्त आदिले सेवा पाएर जुनआनन्दको अनुभुति गर्दछन त्यो आनन्द पनि म नैहो अर्थात अको अर्थमा बुझ्नेको भने यस चराचर जगतमा जे पनि देखिन्छ, सुनिन्छ , स्पर्स गरिन्छ र अनुभव गरीन्छ ति सबैमा इश्वरकोनै उपश्थिति रहेको छ । यसरी भगवानको अवतारको हामी माझामा उपश्थिती हुँदा हामी मन्द बुद्धि मानवहरु एसलाई चिन्न सक्दैनौ र साधारण मनुष्य जस्तो ठान्दछौं। भ्गवान शीव, राम, कृष्ण, वुद्ध तथा विभिन्न देवी देवता अक्कलकोट महाराज समर्थनाथ सिरडी साई , सत्य साई हुदै आज हाम्रो पुत्र , भाई , वन्धु , वान्धव, सखा, सहोदरको रुपमा श्री संजय साई आउनुभएको छ । उहाँले एक गुरुले झैं हाम्रा क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा गरेर आधुनिक सि सि क्यामेरालेजस्तौ हामीमाथी निग्रानि राख्दै हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्ने , हाम्रो उत्थान र उन्नती को मार्ग प्रशस्त गर्ने महान गुरुको नेपालको भूमीको काठमाण्डौ , कोटेश्वर , नरेफाँट स्थीत श्री संजय साई वृन्दावन आश्रमका हरेक हप्ता अमृतवचन श्रवण र प्राय जसो दिनहरुमा दर्शन भजन , स्पर्स , सम्भाषण गरेर प्रत्यक्ष लाभ लिन सफल भएका छौं । यसलाई हामी हाम्रो अहोभाग्य सम्झिएका छौं । अझ पनि कयौं ब्यक्तिहरु कसैले नचिनेर कसैले महत्व नबुझेर उहाँवाट वक्स हुने दिव्य ज्ञान र मार्ग दर्शन लिन वाट वन्चित भएका छन् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो हामी अवतारको समकालिन छौं र पनि दर्शनवाट वन्चित छौं । बाबामा हामि योविनम्र प्रार्थाना गर्दछौं की हामी सबै हजुका सन्तान हौं त्यसैले हामी सम्पूणमा हजुरको क्रिपादृष्टि परोस ।
विभिन्न शास्त्र , भागवत गीता , श्रीमद भागवतमा दसम स्कन्द सम्ममा । भगवानका दिव्य लिला सम्वन्धि वर्णन आउदछन् । एकादश स्कन्ध पछिमात्र ज्ञान खण्ड सुरु हुन्छ । तर वावाका सन्धर्भमा भन्नेको भने लिला, महिमा, र उपदेश(ज्ञान) संग संगै अभिब्यक्त हुन्छन् । हामी यसलाई भगवानकै क्रिपा सम्झन्छौं । नत्र हजारौं हजार ब्यत्तिहरु मध्य हामी एक हुने थिएनौं । यो अवशर सुवर्ण अवसरहो भनिन्छ स्वर्गका देवताहरु पनि अवतारहरुकोदर्शन कोलागि लालायित हुन्छन रे । सुरु सुरुमा प्रवेश गर्दा त हामी सामान्य सन्सारी भएर गएका हुन्छौं केहि समय वित्दै गए पछि अवतारी पुरुषको क्रिपा दृष्टिवाट समग्र विज्ञान सहितको त्रान भएको ज्ञानी भक्त पनि हुन सक्छौं । जसरी एक चुमवकले सबै चुम्वकीय धातुहरुलाई आफुतिर आकर्सीत गर्दछ । प्रभुको क्रिपावाट हामी सबै उहाँ तर्फ आकर्शित हुने मौका मिलोस । पारषमणीले फलामलाई स्पर्स गर्ना साथ फलाम सुनमा परिणत भए जस्तो हाम्रा मन भित्र रहेका खराव विचार , कु संस्कार ,कुभाव,कुदृष्टी हरु वोकेर गएता पनि वावालाई देख्ना साथ यदि समर्पणको भवना उत्पन्न भयोभने सबै नास भएर जान्छ यसमा दुईमत छैन । आश्रममा वेश गर्दा आनन्दको अनुभुति हुन थाल्यो भने समझनु पर्दछ की हामीमा भक्तिको ढोका खुल्दै छ । हामीमा पूर्ण रुपमा विश्वास र समर्पण भाव आउन थाल्यो भने मानौ अव बाबाको क्रिपा सुरु भयो । प्रत्यक भक्तहरु जसले बाबा लाई विश्वास गर्दछ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण वाट उसले बाबाको क्रिपाको अनुभुति पाइरहेको हुन्छ । यस प्रसंगमा “बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको विंड अर्थात एक काठको ठुटो” भन्ने उखान सान्दर्भिक लाग्छ । भनाइको तात्पर्य यहि नै हो की बुझे भगवान नवुझे साधारण मान्छे । सानै कलिलै उमेर देखी गृहत्याग गरेर वेद,पुराण,विभिन्न शास्त्र गिता , रामायण महाभारत आदिमा भएका दिब्य ज्ञान दिनका लागि कलियुगका (कृष्ण) अवतारी पुरुषले हामी समक्ष उपस्थित भएर हामीलाई घचघच्याइरहनु भएको छ । अव हामीहरुले जागरुक भएर मनको ढोका खोल्ने वेला आइसकेको छ । संसार भवसागरमा मात्र अल्झएिर जिवन खेर फाल्नु हुदैन । बाबाको जीवनी पढेर, सुनेर, बुझेर हामीले उहाँको जीवननै हाम्रो लागि अपूर्व , अमुल्य, अनमोल र असिम सन्देशहो भन्ने कुरो बुझ्न अव ढिला गर्नु हुदैन ।
My Life is my Message बाबा को यो सन्देशले हामीलाई उहाँको जीवनी निहाल्न प्रेरित गर्दछ । साधारण एउटा मेखलाको वस्त्र , शुद्ध सफा र प्रेम सहितको थोरै भोजन तर स्वास्थ्य शिक्षा र खानेपानी जस्ता मानविय आवशयकतामा आधारित सबै सत्य तथ्य महान कार्यहरुमा देखाइ वक्सेको भुमिकाको जति वर्णन गरे पनि कम नै हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी राज्यको तर्फ वाट निशुल्क हुनु पर्ने हो तर यसको सुरुवात बाबा बाट भैसकेको उदहारण धनगडीको कनरी गाउमा गएर प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । जहाँ निशुल्क शिक्षाकोलागि एक निशुल्क विद्यालय , स्वास्थ्येमा एक निशुल्क ल्किनिक र खाने पानीको लागि बोरीङ गरेर ट्याड्ढी राखी निशुल्क खाने पानीको ब्यवस्था गरिएको छ । बाबाको मिसन लाई राज्य लगायत हामी सबै मिलेर सभाउने हो भने एक समृद्ध नेपालको चेहरा दुख्न धेरैदिन कुर्नु नै पर्ने थिएन । सबैमा निश्वार्थ प्रेम नै बाबाको मुल संन्देश हो । २८ वर्षको यूवा अवस्थामा वच्चासंग वच्चा जस्तै बुढा संग बुढाजस्तै, विशिष्ट ब्यक्ति संग विशिष्ट नै तरीकाले , ज्ञानी संग ज्ञानी नै भएर र आफ्ना भक्तहरुसंग भगवान भएर जसको जस्तो भाव छ त्यस संग त्यस्तै भएर दयालु ब्यवहार र क्रिपा दृष्टि राख्ने उहाा को जीवन हाम्रो लागि एक महान सन्देसात्मक जीवन भएर सावित भएको छ । अहिले नेपालमा शिक्षा र रोजगारी को वहानामा विदेशिने क्रम प्रचुर भएको छ । आफ्नै देशमा वसेर माता पिता ,देश र जनताको सेवामा लाग्नु पर्ने कुरालाई बाबाले जोड दिनु भएको छ ।
यस संसारमा सबै किसिमका सुखः सुविधाहरु छन र पनिहामीमा कीन आनन्द , शान्ति, सन्तुष्टि आउदैन ? यस विषयमा बाबा एक दिब्य उपदेशको माध्यमवाट भननुहुन्छ की हामी मा भिटामिन जी को कमी छ । G भनेको GOD हामी GOD को नाम स्मरण गर्ने र उसले स्थापित गरिदिएको वाटो इमान्दारी पूर्वक हिड्यौं भने स्वतः आनन्दित, शान्त, धैर्यवान सन्तुष्ट र संयम हुदै जान्छौं । नियमित यस्ता ब्यवहार हरु गर्दै गएको खण्डमा हामी मानव वाट माधव तिरको मार्ग प्रसस्त हुदै जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
अन्तमा जादा जादै एक दिब्य चमत्कार को वर्णन नगरीरहन सकिन । २०७० शालको शिवरात्रिको पावन पर्व थियो । सबै धार्मिक पर्वहरु भव्यताका साथ मनाउने हाम्रो साई परम्परा अनुसार सवै भक्तजनहरु आश्रमको हलमा भरीभराउ थिए । बाबा बाट निकालिवक्सने स्वर्ण लिंग (जसलाई आत्म लींग भनेर भनिन्छ) को दर्शनको कौतुहल प्राय जसो नयाँ भक्तहरुको मुहारमा देख्न सकिन्थ्यो । विस्तारै भजन सुरु भयो माहोल अति आनन्दको थियो । सबै जस्तै मेरा आँखा पनि बाबा तिरनै केन्द्रित थिए । कति वेला शिवलिंगको दर्शन हुन्छ भनेर आखाहरु चन्चल भैरहेका थिए । यता उता हेर्दा हेर्दै मेरा आँखा अचानक वावाको शिरमा पुग्यो । मैले त्याँहा देखे की बाबाको कपालबाट पहेलो किसीमको धँुवा निस्किरहेको थियो विस्तारै मैले त्यो धुँवा बाबाको पाखुरावाट पनि निस्किएको देखें । अझ अचम्मको कुरा तयो थियो की त्यो धुँवा बाबा वाट निस्किएर बाबाको दायाँ वाँया वसिराखेका विद्यार्थी द्वय समीन र यादव साइरामहरुमा प्रवेश गरिराखेको थियो । म हेरिनै रहें मनमा यो अनुमान लगाए की दिव्यपूरुषको सामिप्यमा रहेमा हामीमा पनि त्यस्ता उर्जाका किराहरु प्रवेश गर्दछन । त्यसैले बाबा एक असाधारण गुरु तत्वहुनुहुन्छ । यसरहस्यलाई बुझेर हामी सबै त्यस दिब्यताको उर्जाग्रहणगर्न आफुलाई अग्रसर गराउँ । बाबाकै भनाईमा Be aleart Be Aware को Slogan सधै हृदयमा धारण गरी त्यस परमधाम तर्फ उन्मुख वनौं । यहि हाम्रो परम कर्तब्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ । श्री साईश्वरार्पणमस्तु । । । ॐ साईराम